NYI LYNN SECK 18+ DEN: August 2010
Who's Who in Burma (3)
401. Thin, Chow Soon (Sole Proprietor, Burmese Curio Depot)
402. Thin, U Po, K.S.M., A.T.M., (retired Extra Assistant Conservator of Forests, Member of the Legislative Council for Katha)
403. Tirumalai, T. Mudaliar, (Raw Bahadur, Treasurer, Currency Office, Rangoon)
404. Trutwein, Frederick Alexander Charles (Advocate, Bassein)
405. Thit, U (Broker)
406. Than, U Po (Land Owner)
407. Thornton, Hugh Aylmer, C.I.E., B.A., I.C.S., (Commissioner, Sagaing)
408. Taggart, William Qayle, M.C., B.A.
409. Tun, U Paw, A.T.M., (Member of the Legislative Council, Barrister at Law, Deputy President of the Burma Legislative Council)
410. Thu, U Hla Baw, A.T.M., (Retired District Superintendent of Police)
411. Tin, U Ba, (Barrister at Law)
412. Trench, Desmond Patrick, (Field’s Agent, Finlay Fleming & Co., Yenangyaung)
413. Trutwein, Percy Wallace (District and Session Judge, Tharrawaddy)
414. Tsain, U, M.R.A.S., F.T.S., (Barrister at Law of Middle Temple, Lendon, E.C.)
415. Tun, U (Land Owner, Money Lender, and General Merchant, Pyapon)
416. Tun, Dr. Aung, B.A. (Cal.), M.B., ch.B. (Edin), Captain, Civil Surgeon, Pegu
417. Tun, U Mra (Member of the Legislative Council, Akyab)
418. Tun, U Saw Ba, B.A., (Headquarters Assistant, and Special Power Magistrate, Mergui)
419. Tin, U Maung, K.S.M., A.T.M., (Extra Assistant Commissioner)
420. U, Maung Ba (Member of the Burma Legislative Council, Twinzayo, and Pleader, Yenangyaung)
421. U, U Kyaw Zan (Rice Miller)
422. Umedchand, Jamnadas (Jeweller, Mandalay)
423. U, U Mya, F.R.C.S., M.R.A.S., Bar at Law (Sagaing)
424. U, U San Tun (Akyab)
425. U, U Tha Zan, B.A., B.L., A.T.M., (District and Sessions Judge, Akyab)
426. Vakharia, Jehangir Rustanji (Barrister at Law)
427. Venkataswamy, Dommely (Member of the Legislative Council, Merchant and Contractor, Rangoon)
428. Veerappa, M. A. L., Chettyar (Banker and Money Lender, Hony, Secretary Nattukotta Chettyars Association, Burma)
429. Villa, Ernest Andrea (Rangoon)
430. #The British Plumbing & Sanitary Engineering Co., Ltd. (70, Lewis Street, Rangoon)
431. #Deacon Clark & Co.
432. Wa, San (Barrister at Law, Mandalay)
433. We, Maung Tun (Timber Merchant, Kotaungbo, Shwebo District)
434. Watt, James MacGaurin (Proprietor, Rubber Planter, Mine Owner, and Cattle Dealer, Tavoy)
435. Watson, Hugh, Wesley, Allen (Chief Conservator of Forest, Rangoon)
436. Whitcombe, Charles Edward (Executive Engineer, Public Works Department, Akyab)
437. Wright, John Moncrieff, C.B.E., B.A., I.C.S. (Deputy Commissioner, Insein)
438. Wellborne, Major Cyril de Montfort, O.B.E., I.A
439. Wroughton, Francis Harold (Siamese Consul, Rangoon. Manager, Bombay Burma Trading Corporation, Ltd)
440. Wellington, Leo Henry (Member of the Legislative Council, Tavoy)
441. Win, U Ba (Burma Excise Service, Rangoon)
442. Ya, U Gaw (Government Prosecutor, Monywa and Minbu District)
443. Yan, Lim Kyee (Proprietor, Tavoy Electric Supplies, and Mine Owner, Tavoy)
444. Ya, U Tun, K.S.M., A.T.M.,(Deputy Commissioner, Myaungmya)
445. Yaitt, G. Shwe (Rubber Estate Owner, General Merchant, B.I.S.N. Agent, Pearler, and Mill Owner, Mergui)
446. Yin, The Honorable U Ba, M.B., ch. B., (Edin.), (Minister for Education, Local Government, and Public Health, Rangoon)
447. Yain, The Honorable Mr. Lee Ah, K.I.H., (Minister for Forests and Agriculture, Rangoon)
448. Yo, U Sein (Officiating Deputy Commissioner, Kyaukse)
449. Ywe, Saya, T.P.S. (Twinzayo, Yenangyaung)
450. Yonei, Toraichiro (Merchant, Mergui)
451. Yun, Maung Shwe (Mohamed Ayoob), M.B.E., (Member of the Legislative Council, Advocate, and Public Prosecutor, Mergui)
452. Zan, U Tha, M.L.C. (Sagaing)
453. Ibrahim, Babu (Contractor, Pegu)
454. Zan, U Kyaw, B.A., (Headmaster, Government High School, Minbu)
455. Ram, Rai Bahadur Sita (Retired Deputy Superintendent of Police, Rangoon)
456. Tut, U Tin, M.A. (Cantab), I.C.S., Barrister at Law, (Joint Registrar of Co-operative Societies, Government of Burma, Rangoon)
457. Kyaw, Maung, B.A., (Secretariat to the Government of Burma, in the Judicial Department, Rangoon)
458. Nyo, U (Pazaundaung, Rangoon)
459. Fearnley-Whittingstall, Francis Herbert (Private Secretary to H.E. Sir Harcourt Butler, Rangoon)
460. Wali Mohamed, Khan Saheb (Contractor and Mill Owner, Henzada)
461. Hlaing, U Ba, B.A., (1st Assistant Assessor of the Corporation, Rangoon)
462. Cohen, Abraham Jacob (A. J. Cohen & Co., Rangoon)
463. #Messrs. R. D. TaTa & Co., Ltd.
Posted by NLS at 8/28/2010 09:07:00 AM 1 comment Links to this post
၈မိုင်လမ်းဆုံက ဘိုးတှော့ ခြသေဿင့ကြီး
၈မိုင် မီးပွိုင့်လည်း ဖြတ်ရော ကားကြီးက အဲလို ထောင်ပာလေရော။ ကင်မရာက ကားထဲမှာ အဆင်သင့် ရှိနေပေမယ့် ကားမောင်းနေရင်း တစ်ဖက်နဲ့မို့ ရိုက်ရတာက အဆင်မပြေ
ဒာနဲ့ ကားကို တစ်ပာတ် ပြန်ကွေ့ပြီး မီးပွိုင့်ကို ထပ်ဖြတ်။ ဖြေးဖြေးပြန်မောင်း။ တစ်ကွက်ချင်းရိုက်
သစ်တွေ မတန်တဆ တင်လာတာကိုး။ ကားသမားကတော့ ရုတ်တရက် နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ် ထင်မှာပဲ
နောက်မှာသာ ဆလွန်းလိုကား ကပ်ပာလာရင် အားလုံးပွဲချင်းပြီးမှာ အသေအချာ
မော့နေတဲ့ကားခောင်းကို ဘယ်လို ပြန်ချမလဲ သိချင်ပာဘိ
မြင်းများ ပတပ်ရပ်လိုက်သလိုထင်ရ။ ဘိုးတှောဘုရားရဲ့ တစ်ဖက်ကမ်းကူးမယ့် ခြသေဿင့ကြီးတွေတောင် သွားသတိရမိသေး။
ဘုရားစူး ဒီကား ခောင်းထောင်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တှော ကြိုမသိပာဘူး။ (သကြဿငန်ကိစဿစတုန်းကလို စွပ်စွဲကြမစိုးလို့ ကြိုကာထားရတယ်) ဒာပေမယ့် ကျွန်တှောကလည်း ကိုယ့်ရှေ့မှာ အဲဒာမျိုးတွေ ခဏခဏကြုံရတတ်ပာတယ် ကိုမျိုးသာထက်ကတော့ Luck ရှိတယ် သတင်းထောက် လုပ်ပာလားလို့ ပို့သဗျ :D။ ဒာပေမယ့် အဲဒီလို ဖြစ်တိုင်းလည်း ဒီလိုပုံရမယ်လို့ တွက်ထားလို့ မရပြန်ဘူး။ အဲဒီအတွက် ကိုယ်က အမြဲတမ်း အသင့်ပြင်ထားရပာတယ်။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် ကင်မရာ ဝယ်ထားရတယ်။ အားအမြဲသွင်းထားရတယ်။ သွားလေရာ သယ်ရတယ်။ ပုံကောင်းလိုချင်ရင် အချိန်ထပ်ပေးတန်ပေး အားထုတ်တန်ထုတ်ရ လုပ်ရတယ်။ အရိပ်သုံးပားလည်း နားလည်ရတယ်။ W ခြောက်လုံး မဟုတ်တောင် ဘယ်နေရာမှာ ဘာဖြစ်တယ် ဘာကြောင့် ဘယ်လို လောက်တော့ ပာအောင် ကြိုးစားရိုက်ရပာတယ်။ ပြီးတော့ ဓာတ်ပုံကောင်းဖို့ အတွက်ဆိုရင် အမြင်လည်း ရှိဖို့ လိုအပ်မယ် ထင်တယ်။
ကြက်ကန်းတိုးပြီး ရိုက်လာတဲ့ ရလာတဲ့ ဓာတ်ပုံမျိုး မဟုတ်ပာဘူး။ ဒာမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့ရင် ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးကို အရင်တွေးထားပြီးမှ ဖြစ်လာတဲ့အခာ တစ်ပြိုင်နက် မှတ်တမ်းတင်နိုင်အောင် အချိန်ယူ ပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်လာတာကို တကူးတက ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံပာ။ မိုးတွေကရွာ၊ ကားတွေက ပိတ်၊ ကားမောင်းရင်းတစ်ဖက်၊ ကိုယ်ချိန်းထားတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ၁ဝမိနစ်လောက် နောက်ကျခံပြီး ရိုက်ယူတာပာ။ သကြဿငန်ပုံတို့၊ ကြွက်ကိစဿစတို့တုန်းက ပုံတွေဆိုရင် ဒီထက်ပိုပြီး ရင်းနှီး အားထည့် ရပာသေးတယ်။
ဒီလိုနေရာကို ဒီကားက ဘယ်လိုရောက်လာသလဲ။ လမ်းတွေမှာ ဘဲဥတွေ ဖမ်းနေလိုက်တာဆိုမှ နည်းတာ မဟုတ်တဲ့ကြားက သူဘယ်လို လွတ်လာသလဲ။ အနဿတရာယ်များတဲ့ ပစဿစည်းတွေကို ဘာကြောင့် စနစ်တကျ ချည်နှောင်တုတ်စည်း မလာသလဲ။ ဘာကြောင့် ခံနိုင်ဝန်အားထက် ပိုတင်လာသလဲ။ ပြီးရင် ဒီအမှုက ဘယ်လို ဆက်ဖြစ်မလဲ စတဲ့စတဲ့ ကိစဿစတွေဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းဘူးလားဗျာ။ တကယ်လို့များ အဲဒီကားနောက်ကသာ မိသားစုစီးလာတဲ့ ကားတစ်စီးစီးသာ ကပ်ပာလာခဲ့ရင် သေချာပောက် ပွဲချင်းပြီးဇာတ်လမ်း ဖြစ်မှာပာ။ အခန့်မသင့်ရင် လမ်းသွားလမ်းလာ ခရီးသွားတွေလည်း ထိခိုက်မိနိုင်သေးတယ်။ အတှော့ကို ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပာ။
ကျွန်တှော လုပ်နေတယ် ဆိုတာကလည်း CJ အတွက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်နေတာ ဖြစ်ပာတယ်။ အဓိကက ဒီသတင်းဓာတ်ပုံကို ဒီထက်စောပြီး ဘယ်ဂျာနယ်မှာမှ မမြင်တွေ့နိုင်ဘူး ဆိုတာ ပြချင်တာပာ။ အဲဒာဟာ CJ ရဲ့ Power တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပာတယ်။
နေရာ။ ၈ မိုင် မီးပွိုင့်
အချိန်။ ညနေ လေးနာရီဝန်းကျင်
Posted by NLS at 8/17/2010 11:15:00 PM 15 comments Links to this post
Labels: Interesting, Myanmar, News
Ning breaks my Heart
We have tried hard to build some successful social networks for society. At first, Ning was free and later they changed their mind to turn it as commercial service. That's really stupid idea I think. Why did they set it free at start, and why did they change plan after getting too many users. They think only for their survive none for us. Fuck off Ning. I'll never ever use yours again and I'll try to start it again from very begining. I do really sorry for these two networks; Myanmar Blogger Society and Myanmar Books Catalogue.
5 DAYS LEFT TO CHOOSE A PLAN
Friday is the final day for free Ning Networks
On 8/11/2008,anew social network popped up on the Internet. Yours.
Your network has grown upabit since you started the ball rolling. You have grown to 1626 members who have collectively helped you add 1162 photos, some interesting videos, and 416 spirited discussions. Well done! We'd like to see you continue. We're contacting you today to remind you that you still have time to chooseanew Ning plan. But, time is running out. If you do not chooseanew plan by this Friday, August 20, 2010, the community you built will ultimately be lost.
Every secret ofawriter's soul, every experience of his life, every quality of his mind is written large in his works. (Virginia Woolf)
Posted by NLS at 8/16/2010 02:59:00 PM4comments Links to this post
Aware your online security by yourself first
အီးမေးလ်တွေ ပျက်တယ်၊ ကိုယ့်လျှို့ဝှက်ဒေတာတွေ ပျောက်တယ်၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်တွေ အခိုးခံရတယ် စတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေမှာ တကယ်တော့ ကိုယ့်အားနည်းချက်က 80% လောက်ကို ပာပာတယ်။ ကိုယ့်အီးမေးလ်ကို ဖျက်ပစ်တော့မယ် ဘာညာနဲ့ ခြိမ်းလားခြောက်လား မေးလ်ပို့ပြီး မဖျက်စေချင်ရင် Activate လုပ်ဆိုပြီး ပို့လာတဲ့ မေးလ်တွေကိုက တကယ်တော့ သူခိုးတွေပဲ။ သူတို့ဟာ Gmail Team က ပို့နေသလိုလို၊ စေတနာကောင်း သလိုလိုနဲ့ ကိုယ့်ဆီက အချက်အလက်တွေကို နှိုက်ယူနေတာပာ။ တကယ့်ကို ဧဓားပြ တိုက်တာပာပဲ။ ဒာကို မသိဘဲ အစိုးရိမ်ကြီး စိုးရိမ်လို့ ကိုယ်က ဒာတွေ သွားပေးမိရင် ကိုယ့်ဒုကဿခ ကိုယ်ရှာတာနဲ့ အတူတူပာပဲ။ အောက်ကစာက ခုနပြောသလို ကိုယ့်ဆီကနေ ဘလိုင်းကြီး လာနှိုက်တဲ့ သူခိုးစာပာပဲ။ ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ အသွင်အပြင် အမျိုးမျိုးနဲ့ ရှိနိုင်ပေမယ့် ဒီသဘောအတိုင်းပာပဲ။ ယေဘုယျ မှတ်ထားရမှာက အီးမေးလ်ကနေ ကိုယ့်အချက်အလက်တွေ လာတောင်းနေတဲ့ မေးလ်တွေ့ရင် စိတ်ချလက်ချသာ ဖျက်ပစ်လိုက်ပာ။ စိုးရိမ်မနေပာနဲ့။ ဘာစာမှကို ပြန်မနေပာနဲ့။ အကောင်းဆုံးကတော့ ဖွင့်ကို ဖတ်မနေပာနဲ့။
Due to congestion in our database system, We have come to realize that your account information on our database system are out of date, asaresult of that we require you to verify your Information. Failure to verify your information will result in account suspension. If you are still interested in using our email service, Please click the reply button and fill the below spaces as requested.
Posted by NLS at 8/16/2010 12:10:00 AM2comments Links to this post
တောင်ဘက် (ကိုးသင်း) မြင်းဝန်
မြေနန်း (သေနတ်) ဝန်
မြောက်ဘက် (ကိုးသင်း) မြင်းဝန်
ရဲလှေ (တိုက်) ဝန်
Posted by NLS at 8/15/2010 11:46:00 PM 1 comment Links to this post
ဝမ်းသာမှုရဲ့အသံ (The Voice of Happiness)
ဘုန်းတှောကြီး ဘန်ခဲအိ ပျံလွန်တှောမူပြီးတဲ့နောက် မျက်မမြင် တစ်ယောက်က သူ့မိတ်ဆွေတွေကို ဒီလို ပြောတယ်။ ငာ မျက်စိကွယ်တဲ့ အချိန်ကစလို့ ဘယ်သူ့ မျက်နှာကိုမှ မမြင်နိုင်တော့ဘူး၊ ဒာကြောင့် လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို သူ့ရဲ့ စကားသံတွေကို နားဆင်ပြီးတော့ပဲ ဆုံးဖြတ်ရတော့တယ်။ ပြောရရင်တော့ လူတစ်ယောက်ဟာ အခြားလူတစ်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်မှု ပျှောရွှင်မှုတွေအပှောမှာ ချီးကျူးစကား ပြောနေပြီဆိုရင် ငာက တခြားတစ်ဖက်ကနေ အဲဒီလူရဲ့ မနာလိုမှုတွေကိုလည်း ငာခံစားရင်း ကြားနေမိတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် ကံမကောင်းမှု ဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက် ဝမ်းနည်းစကား ဆိုနေရင်လည်း တစ်ဖက်မှာ အဲဒီဆုံးရှုံးသွားသူဆီကနေ တစ်ခုခု ရလိုက်သလိုမျိုး ပျှောရွှင်မှု၊ ကျေနပ်အားရမှုတွေကို ကြားလာရတယ်။ ဒာပေမယ့် ငာကြုံခဲ့ရသမျှထဲမှာတော့ ဘုန်းတှောကြီး ဘန်ခဲအိ တစ်ပားထဲသာ တသမတ်ထဲပဲ။ သူဝမ်းသာကြောင်း ပြောတဲ့အခာ ဝမ်းသာမှုမှတပား အခြားအသံကို ငာမခံစားမိဘူး။ ဒီလိုပဲ သူဝမ်းနည်းကြောင်း ဆိုလာရင်လည်း သူ့အသံမှာ ဝမ်းနည်းမှု တစ်မျိုးထဲကိုပဲ ငာခံစားရတယ်။
မရှိခြင်းတရား (Flower Shower)
ဘုန်းတှောကြီး သုဗောဓိဟာ မြတ်ဗုဒဿဓရဲ့ သားတှော ရဟန်းတစ်ပား ဖြစ်ပာတယ်။ အရာရာဟာ မတည်မြဲဘဲ ဖြစ်ခြင်းနဲ့ ပျက်ခြင်း နှစ်ပားကသာ အရာရာကို ကြိုးကိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့ အနတဿထတရားရဲ့ ရှု့ထောင့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မရှိခြင်းတရားကို ကောင်းစွာ နားလည်ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ သူဟာ သစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာ အဲဒီတရားသဘောကို ဆင်ခြင်နေတဲ့ အခိုက်မှာ သူ့အပှောကို ပန်းတွေ ကြွေကျလာပာတယ်။ မရှိခြင်းတရားသဘောကို ဆင်ခြင်ကျင့်ကြံတဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့က ဂုဏ်ပြုတာပာ ဆိုပြီးတော့ နတ်ဒေဝတာတွေက ပြောသံကိုလည်း ကြားလိုက်တယ်။ အဲဒီအခာ ဘုန်းတှောကြီးက အလို ငာလည်း သင်တို့ကို အဲဒီအကြောင်း မပြောပြရပာလားလို့ ဆိုသတဲ့။ အဲဒီအခာ နတ်တွေက အရှင်ဘုရားက မရှိခြင်းတရားကို မပြောသလို တပည့်တှောတို့လည်း မကြားရပာဘူး ဘုရား။ ဒီအရာကပဲ တကယ့် မရှိခြင်း တရားသာ ဖြစ်ပာတယ်လို့ လျှောက်ထားပြီး ပန်းမိုးတွေ ထပ်မံ ရွာချလိုက်ပာသတဲ့။
ဂုဏ် (Calling Card)
မီဂျီခေတ်၊ ကျိုတိုမြို့တှောက တိုဖုကုကျောင်းတိုက်က ဘုန်းတှောကြီး ခိအိချုဟာ နာမည်ကျှော ဇင်ပညာရှိကြီး တစ်ဦး ဖြစ်ပာတယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ ကျိုတိုမြို့တှောဝန်က ဘုန်းတှောကြီးကို တွေ့ခွင့်ရဖို့ စာလွှာပေးပို့ခိုင်းပာတယ်။ စာအောက်မှာ ကိတာဂကီ၊ ကျိုတိုမြို့တှောဝန် ဆိုပြီးတော့ ရေးထားတယ်။ ဘုန်းတှောကြီးဟာ စာဖတ်ပြီးတဲ့ နောက်မှာ ငာ့မှာ ဒီလိုလူနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ အကြောင်းကိစဿစ မရှိတာမို့ အဲဒီလူကို ကျောင်းဝန်းထဲကနေ ထွက်သွားဖို့ ပြောလိုက်တော့လို့ ဆိုပြီး စာကို ပြန်ပေးလိုက်တယ်။ ဘုန်းကြီးရဲ့ တပည့်သာဝကတွေက စာကို မြို့တှောဝန်ကို ပြန်ပေးပြီး အကျိုးအကြောင်း ပြောပြတဲ့အခာ မြို့တှောဝန်ဟာ ဒာတပည့်တှော အမှားပာ ဆိုပြီးတော့ စာထဲမှာပာတဲ့ ကျိုတိုမြို့တှောဝန် ဆိုတဲ့ စာသားကို ဖျက်ထုတ်လိုက်ပာတယ်။ ပြီးတော့မှ ဘုန်းတှောကြီးကို ထပ်မံ လျှောက်ထားစေပာသတဲ့။ ဒုတိယအကြိမ်မှာ ဘုန်းတှောကြီးက စာကို ဖတ်ပြီး အှော ကိတာဂကီလား သူ့ကိုဖြင့် ငာတွေ့ချင်နေတာ ဆိုပြီးတော့ ပြောလိုက်ပာတယ်။
အမှီအတွယ် (No Water, No Moon)
သီလရှင် ချိယွန်နိုဟာ ဇင်တရားကို လေ့လာသင်ကြားနေပေမယ့် ကာလအတန်ကြာတဲ့အထိ တရားမပောက်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ လသာတဲ့ ညတစ်ညမှာတော့ သူဟာ နှီးတွေနဲ့ ကွပ်ထားတဲ့ ရေပုံး အဟောင်းမှာ ရေကို ထည့်လို့ သယ်လာခဲ့တယ်။ လမ်းမှာပဲ ပတ်ထားတဲ့ နှီးတွေဟာ ကျိုးပြတ်ပြီး ရေပုံးဖင်ဟာ ပွင့်ထွက်သွားတော့တယ်။ အဲဒီကာလလေးမှာပဲ ချိယွန်နိုဟာ ဉာဏ်အလင်းပွင့်သွားခဲ့ပာသတဲ့။ သူမဟာ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် ရေးခဲ့တယ်။
ရေပုံးဟောင်းကို ထိန်းဖို့ ကြိုးစားရင်း ငာလှမ်းခဲ့တယ်
နောက်ဆုံး ရေပုံး ပွင့်ထွက်မသွားခင် အချိန်အထိပော့
ရေပုံးထဲမှာ ရေတစ်စက်မှ မရှိတော့တဲ့အခာ
လဆိုတာလည်း ရေထဲမှာ မရှိတော့
တိတ်ဆိတ်ခြင်းတရား (The Silent Temple)
ရှိုအိချိဟာ မျက်စိတစ်ဖက်သာ ရှိပြီး ဉာဏ်အလင်းပောက်နေသူအဖြစ် ထင်ရှားတဲ့ ဇင်ပညာရှင်ကြီး ဖြစ်ပာတယ်။ သူဟာ ကျိုတိုမှာရှိတဲ့ တိုဖူကု ကျောင်းမှာ တပည့်တွေကို သင်ကြားပြသတယ်။ ဒာပေမယ့် နေ့နေ့ညည သူတို့ ဘုရားကျောင်းဟာ တိတ်ဆိတ်လို့ နေပာတယ်။ ဘာသံမှကို မကြားရပာဘူး။ ဆရာကိုယ်တိုင်က သုတဿတန်တွေကိုတောင်မှ မရွတ်ဖတ်လေတော့ တပည့်တွေလည်း တရားထိုင်ရုံမှတပား အခြား ဘာမှ မလုပ်ကြရပာဘူး။ တစ်ရက်မှာတော့ သူတို့ ကျောင်းကနေ ခောင်းလောင်းထိုးသံနဲ့ တပည့်တွေရဲ့ သုတဿတန်ရွတ်ဖတ်သံတွေကို အိမ်နီးချင်း အမျိုးသမီးက ကြားရပာသတဲ့။ ကြားကြားချင်းမှာပဲ ဆရာတှော ရှိုအိချိ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီလို့ သူမ နားလည်လိုက်ပာတယ်တဲ့။
လှိုင်ခောင်း (The Tunnel)
ဆာမူရိုင်း တစ်ဦးရဲ့ သားဖြစ်တဲ့ ဇန်ကိုင်းအိဟာ အဲဒိုးအရပ်ကို ခရီးထွက်ခွာလာခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အရာရှိကြီး တစ်ဦးရဲ့ အမှုထမ်း ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သူဟာ အဲဒီအရာရှိကြီးရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ ချစ်ကြိုက်မိပာသတဲ့။ အဲဒီဖြစ်ရပ် ပှောပောက်သွားတဲ့အခာ ပြသဿသနာဖြစ်ကြရင်းက သူဟာ ခုခံရင်းနဲ့ အရာရှိကြီးကို သတ်လိုက်မိတယ်။ ပြီးတော့ သူဟာ မိန်းမကို ခှောဆောင်ပြီးတော့ ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။ နောက်တော့ သူတို့ နှစ်ယောက်စလုံး သူခိုးတွေ ဖြစ်လာကြပာတယ်။ ဒာပေမယ့် မိန်းမဖြစ်သူဟာ သိပ်ပြီး ဒောသလောဘ ကြီးလွန်းသူ ဖြစ်တာမို့ ကြာလာတော့ သူစိတ်ပျက်လာတယ်။ ဒာနဲ့ သူဟာ သူမကို ထားခဲ့ပြီး အဝေးကြီးမှာရှိတဲ့ ဘူဇန်ဆိုတဲ့ ဒေသကို ထွက်ခွာခဲ့ပြန်ပာတယ်။ အဲဒီမှာ သူဟာ သူတောင်းစား ဖြစ်လာတယ်။ သူဟာ သူ့အတိတ်က အပြစ်ကြွေးတွေကို ဆပ်နိုင်ဖို့ ဘဝမှာ ကောင်းမှုတစ်ခုခုကို ပြုချင်လာသတဲ့။ အဲဒီအနားမှာ တောင်ကမ်းပား တစ်ခု ရှိတယ်။ အဲဒီကို ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ လူအတှောများများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ၊ သေဆုံးတတ်ကြတာကို သူတွေ့လာတော့ ဘေးကင်းကင်းနဲ့ လိုရာရောက်နိုင်ဖို့ တောင်ကြီးကို ဖောက်ပြီး လှိုဏ်ခောင်း တစ်ခု တူးဖို့ သူအကြံရလာပာတယ်။ ဒာနဲ့ သူဟာ နေ့ခင်းဘက်မှာ တောင်းရမ်းစားသောက်ပြီး ညဘက်မှာ လှိုဏ်ခောင်းကို စတူးပာတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ နှစ်ပောင်း သုံးဆယ် ကြာလာတဲ့အခာ သူ့လှိုင်ခောင်းဟာ ပေ ၂၀ အမြင့်၊ ပေ ၃၀ အကျယ်နဲ့၊ ပေ ၂၂၈၀ အရှည် ရှိလာခဲ့တယ်။ လှိုဏ်ခောင်းပောက်ဖို့ နှစ်နှစ်လောက် အလိုမှာတော့ ဟိုးနှစ်ပောင်းများစွာက သူသတ်ခဲ့တဲ့ အရာရှိကြီးရဲ့သားဟာ ဓားသမား တစ်ယောက် ဖြစ်နေပြီး သူ့ကို လက်စားချေဖို့ လိုက်ရှာနေရာက ရှာဖွေ တွေ့ရှိသွားတယ်။ ငာ့အသက်ကို လိုလိုလားလား မင်းကို ပေးမှာပာ၊ ဒာပေမယ့် ဒီအလုပ်လေးကိုတော့ ငာ့ကို ပြီးဆုံးအောင် လုပ်ခွင့်ပေးပာ၊ ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲ မင်းငာ့ကို သတ်လို့ရပြီလို့ သူက တောင်းပန်ပာတယ်။ ဒာနဲ့ လက်စားချေမယ့်သူကလည်း စောင့်ဖို့ သဘောတူတယ်။ ဒီလိုနဲ့ လပောင်းများစွာ ဇန်ကိုင်းအိဟာ လှိုဏ်ခောင်းကို ဆက်တူးနေခဲ့တယ်။ ကြာလာတော့ ဘာမှမလုပ်ရလို့ ပျင်းလာတဲ့ ဓားသမားဟာ လှိုဏ်ခောင်းတူးဖှောရေးမှာ ကူပြီး တူးပေးပာသတဲ့။ ၁နှစ်ကျှောကြာ ကူညီတူးဖှောလာပြီးတဲ့နောက် ဓားသမားဟာ ဇန်ကိုင်းအိရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ဆနဿဒနဲ့ လုပ်ရပ်အပှောမှာ လေးစားလာပာသတဲ့။ နောက်ဆုံးတစ်နေ့မှာတော့ လှိုဏ်ခောင်းဟာ ဟိုဖက်ဒီဖက် ပောက်သွားပြီး ခရီးသွားလူအများလည်း လွယ်ကူလုံခြုံစွာ သွားနိုင်လာပာတယ်။ ဇန်ကိုင်းအိက ကဲ ငာ့အလုပ်ပြီးသွားပြီ၊ မင်းငာ့ကို သတ်ပာတော့လို့ လိုလိုလားလား ပြောပာတယ်။ အဲဒီအခာ ဓားသမားဟာ မျက်ရည်တွေအပြည့်နဲ့ ငာ့ဆရာရဲ့ ခောင်းကို ငာဘယ်လို ဖြတ်ရက်ပာတော့မလဲလို့ ပြောလိုက်ပာတယ်တဲ့။
တသမတ်ထဲ ခံစားချက် ထားနိုင်မလား ??
မရှိခြင်းတရားကို ရှာလို့မရနိုင်ဘူး။ မရှိခြင်းတရားဟာ နေရာအနှံ့မှာ ရှိနေတာကိုး။
လူကိုပဲ တန်ဖိုးထားရမယ်။ တခြားအရာတွေဟာ အကာအရံတွေ။
လောကကြီးမှာ ချည်နှောင်ထားတဲ့အရာတွေဟာ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးပဲ။
တိတ်ဆိတ်ခြင်းဟာ နှစ်သက်မြတ်နိုးစရာ တရားတစ်ခု ဖြစ်တယ်။
အပြစ်တစ်ခု ကျူးလွန်မိတဲ့အခာ အဲဒာကို ချေဖျက်ချင်ရင် နှစ်ပောင်းများစွာ ပြန်ပေးဆပ်ရမယ်။
Posted by NLS at 8/15/2010 10:11:00 PM2comments Links to this post
Labels: Thought, Translation, Zen
Fix some Zawgyi Font Problems
If your Chrome is crashed when you type Myanmarsar with Zawgyi, fix it as follow:
Go Chrome's Option
Choose> Under the Hood
Choose> Change Font and Language Setting under Web Content
Choose> Zawgyi in Font & Choose Unicode (UTF-8) in Encoding
Go> Language and Uncheck the Check Spelling Box!!!
If you cant see Zawgyi in IE and Chrome
Copy following code in notepad, and save it as ie.txt. Then later change its extension from .txt to .css
Place this ie.css file in C:\_
Open Control Pannel
Open Internet Options
Choose> General Tab
Choose> Font and Choose> Zawgyi-One in Webpage Font (OK)
Check> Ignore font styles specified on webpages
Locate> ie.css (C:\_ie.css) in User style sheet
Code to make ie.css
input, select , textarea
@ Credit goes to SaturnGod!!
If you cant see myanmar texts well on my blog,
Do remember that I am using Zawgyi 2009 font, not usual Zawgyi-One font.
I am not abusing Myanmarsar by creating unappropriate characters combination.
I do not recommand you yet for installing that font even I am using.
You also can use that font as well but remember others will see yours texts as you see mine.
What I can tell is it will beakinda future Zawgyi font development!!!
Post via Gmail
Posted by NLS at 8/13/2010 01:06:00 AM4comments Links to this post
Labels: How To, Zawgyi